Fikarohana momba ny firaisana Ny fiainana taloha Tantaran'i Eeva-Maija Kaartinen | Maria-Liisa Kaartinen: Planin'ny fanahy, Reincarnation & talenta, Fahatongavana ho nofo na fiainana fiainana an-trano - Fikarohana Reincarnation
Rehefa nampanantena ny baikoany ny reniny, dia maty ny zazalahy kely rehefa dimy taona
Eeva-Maija Kaartinen dia teraka tamin'ny volana 17, 1923 tany Oulu, Finlandy. Nanan-janaka telo lahy i Eva, ary samy hafa fiaviana izy. Ny rahalahiny sy ny ray aman-dreniny dia tia mihinana hena sy misotro ronono. Mifanohitra amin'izany, i Eeva-Maija dia nandà tsy hihinan-kena na hisotro ronono. Tiany kosa ny trondro sy ny ronono.
Eeva-Maija dia tsy te hihinana amin'ny ankapobeny sy ny fotoana nanafenany ny sakafony ka tsy voatery nihinana izany izy. Salli Kaartinen, ny reniny, dia hampiofana azy haka sakafo amin'ny filazana hoe: "Mihinàna, mangalà ary mitelina." (1)
Eeva-Maija tia mandihy ary saika nandihy talohan'ny hahafahany nandeha. Nianatra nanao izany izy Charleston, dihy izay nalaza tamin'ny 1920's.
Taorian'ny naha 5 taona azy, i Eeva-Maija dia nidina niaraka tamin'ny trangan'ny gripa. Talohan'ny nahafatesan'i Eeva-Marja, nampanantena i Salli, reniny, fa hividy zaza kilalao. Eeva-Maija dia nandalo tamin'ny volana 24, 1928.
Marja-Liisa dia nilaza fa izy dia ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao ao Eeva-Maija, tsy hihinana,& Mamerina ny andianteny taloha, "Mihinàna, manaikitra ary atelina"
Salli dia bevohoka 3 volana raha maty i Eeva-Maija. Enim-bolana taty aoriana, dia naterak'i Maria 22, 1929, Marja-Liisa Kaartinen.
Rehefa nianatra niteny i Marja-Liisa dia nangataka imbetsaka mba hantsoina hoe Eeva-Maija izy. Tamin'ny taona 2, rehefa nahita sarin'i Eeva-Maija izy dia nalain'izy ireo ny sarin'ny olona ary niteny hoe: "Ireny dia avy amiko." (2)
Marja-Liisa koa dia nanohitra tamin'ny fihinanana sakafo ary tamin'ny taona 2, dia hoy izy tamin-dreniny, Salli: "Fa maninona ianao no tsy hilaza amiko izay nolazainao tamin'i Eeva-Jaija:" Mihinoa, mangalà ary mangalà. "(3)
Tsy nisy nanambàra an'i Marja-Lissa momba ny fampiofanana an'i Sulli an'i Eeva-Jaija, ary toy izany koa ny fahatsiarovan-dry zareo tamin'ny andro taloha. Nanamarina i Salli fa nanapa-kevitra ny fianakaviany fa tsy hiresaka momba Eeva-Maija, taorian'ny nahafatesany, tamin'ny ezaka hanamorana ny alahelony.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Nahatsiaro an'i Helim i Marja-Liisa ary nisafidy ny kilalao tamin'ny fiainana taloha
Raha vao 3 taona i Marja-Liisa dia nandeha tany amin'ny trano fialantsasatra tao Sotkomo, Failandy ny fianakaviana. Rehefa tonga tany izy ireo, dia hoy i Marja-Liisa: "Aiza moa i Helim?" (4)
Helim dia mpanompon'ny fianakaviany izay nandao ny asany nandritra ny herintaona talohan'ny nahaterahan'i Marja-Liisa. Indray andro, tsy nisy nanambara azy momba an'i Helim ary toy izany ny reniny dia nahatsikaritra izany ho fahatsiarovana ny fiainan'i Marja-Liisa taloha tahaka an'i Eeva-Maija.
Tao amin'ny efitrano fatorian'ny Sotkomo, nisy vondrona iray nitahiry ny kilalaon'ny ankizy. Rehefa tonga tany Sotkoma ry zareo, Marja-Liisa dia nandeha an-tongotra tamin'ity trompetra ity ary avy eo naka ny kilalao rehetra tao amin'ny Eeva-Maija, namela ny kilalaon'ny ankizy hafa tao amin'ny fitoerany.
Nalany ny baolin'i Eeva-Maija ary nandao ny baolina izay an'ny rahalahiny irery. Nanana saribakoly tao amin'ny fitoerany ny iray tamin'ireo rahalahiny. Nesoriny ilay saribakoly izay an'i Eeva-Maija ary niala ny saribakoly izay anisan'ny rahalahiny tao anaty fitoerany.
Fahatsiarovana an-davanandro momba an'i Peter Pan, akanjo sy fampanantenana amin'ny fiara fitia
Tamin'ny taona 4, nanontany ny reniny i Marja-Liisa hoe: "Taiza isika no nandona an'i Peter Pan" (5)
Salli sy Eeva-Maija no nahita ilay sarimihetsika, Peter Pan, saingy tsy i Marja-Liisa.
Salli, raha ny ao an-dakozian'ny fianakaviana, dia nangataka mpiasa iray mba hividy akanjo misy Eeva-Marija avy ao amin'ilay trano fisakafoanana. Marja-Liisa dia tao an-efitranony ary tsy nandre izany resaka izany. Rehefa nidina avy teo amin'ilay toeram-piantsonana ilay mpanompo, dia nihazakazaka nanatona azy i Marja-Liisa ary nandray ny akanjo lava ary nilaza hoe: "Ny akanjoko, ny akanjoko." (6)
Tamin'ny dimy taona teo ho eo, nanontany an'i Salli i Marja-Liisa noho ilay fiara kely izay nampanantenainy azy. Io fampanantenana io, mazava ho azy, dia natao tamin'ny Eeva-Maija, fa tsy Marja-Liisa.
Toetra niainana taloha: Eeva-Marija sy Marja-Liisa Aza mihinana hena
Tsy nety nihinan-kanina i Marja-Liisa ary nanafina ny sakafo, toa an'i Eeva-Marija. Tsy nety nihinan-kena na ronono ihany koa izy. Toa tiany kosa ny trondro sy ny ronono, toy ny Eeva-Marija. Ny mpianakavy rehetra dia nihinana ronono ary voanio; Eeva-Marija sy Marja-Liisa no hany fanavaka.
Marja-Liisa dia nisafidy ny nitafy ny akanjon'i Eeva-Marija ary nilalao tamin'ny kilalao, fa tsy nanao akanjo vaovao na nilalao tamin'ny kilalao novidina ho azy.
Reincarnation & Talenta fiainana taloha: Charleston tampoka
Tia mozika i Marja-Liisa ary nanomboka nandihy talohan'ny hahafahan'izy ireo nandeha, tahaka an'i Eeva-Marija. Mbola mahagaga ihany, Marija-Liisa, talohan'ny taona 3, dia nahafantatra ny fomba handihy an'i Charleston.
Nampianarina hanao an'i Charleston i Eeva-Marija, raha tsy izany kosa i Marija-Lissa. Izany no nahatonga an'i Marija-Lissa hitondra talenta fanta-daza avy amin'ny fampianarany teo aloha fony i Eeva-Marija tamin'ny vanim-potoana ankehitriny.
Fiainana taloha Fahatsiarovana ny fahafatesana
Raha toa ka efa taona 5 taona i Marja-Liisa, taona mitovy taona niainan'i Eeva-Marija, niaina andian-drariny ny marja-Liisa na nijery faty. Mety ho vokatry ny fitsingerenan'ny taonan'i Eeva-Marija ireo traikefa ireo.
Ny endriky ny taona fankalazana dia voamarina amin'ny tranga vaovao momba ny fitsanganana amin'ny maty, toy ny tranga John B. Gordon Jeff Keene, izay niaina ny fanaintainan'ny matroka nandritra ny faha telopolo taona nahaterahany, dia mitovy taona i John B. Gordon voatifitra teo am-bavany nandritra ny ady amerikana amerikana.
Reincarnation & Fisehoana ara-batana
Araka ny voalazan'i Salli, ny renim-pianakaviana, tahaka an'i Marja-Liisa sy Eeva-Marija dia mitovy. Nilaza i Salli fa ireo tovovavy roa ireo dia "nitovy tanteraka tamin'ny endriny ara-batana". (7) Ny fahasamihafana ihany dia i Eeva-Maija raha mbola tanora i Maria-Liisa.
Drafitra fanahy sy vatana vaovao ao amin'ny fianakaviana: Eeva-Marija dia niorina indray tao amin'ny fianakaviana iray izay efa teo aloha, tahaka an'i Marja-Liisa. Izany dia manohana ny fanirian'i Marja-Liisa antsoina hoe Eeva-Marija, na dia nanapa-kevitra aza ny fianakaviany fa tsy hiresaka momba an'i Eeva-Marija hanamaivana ny alahelony.
Ankoatra izany, nanaiky ny akanjo sy kilalao tao Eeva-Marija i Marja-Liisa ary nilaza azy ireo ho azy. Nanitrikitrika izy fa ny sarin'i Eeva-Marija dia tena sarin'ny tenany manokana. Nasehony fa mitovy ny toetrany amin'ny maha-mendrika azy ny hohanina. Tsaroany ihany koa ny fehezan-teny taloha izay nampiasan'i Salli ny fihinanan-dry Eeva-Maija, izay: "Mihinàna, mangalà ary mitelina." (8)
Marja-Liisa dia nahatsiaro ilay mpanompo, Helim, izay nampiasain'ny fianakaviana fony mbola velona i Eeva-Marija, saingy efa nandao taona iray talohan'ny nahaterahan'i Marja-Liisa.
Reincarnation & Talent tamin'ny fiainana taloha: Fantatr'i Marja-Lissa ny fomba fandihizana an'i Charleston, na dia tsy nampianarina mihitsy aza izy hanao io dihy io. Nampianarina an'i Charleston i Eeva-Marija, izay tiany ny nandihy.
Reincarnation sy endrika ara-batana: I Salli, renin'ny ankizivavy, dia nanamarika fa i Eeva-Marija sy Marja-Lissa dia nanana endrika hita maso, afa-tsy ny loko volom-borona. Mazava ho azy, satria tranga toy ny tranga toy ny vady hafa izany, dia mety ho toy izany koa ny fitoviana ara-batana.
Fiverenana ny fisandratana na fiverenana mivantana: Teraka 6 volana i Marja-Lissa taorian'ny nahafatesan'i Eeva-Marija. Noho izany, raha heverina fa ny fanahy dia tafiditra amin'ny fampiroboroboana ny foetus, dia ny fanahin'ireo tovovavy roa ireo no nonina tao amin'ny vatana i Eeva-Marija sy Marja-Lissa ary tamin'izany fotoana izany nandritra ny fe-potoan'ny 6 volana.
1. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 140
2. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 140
3. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 140
4. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 140
5. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 140
6. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 141
7. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 142
8. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 140